ဘဝမှတ်တိုင်: February 2016
♕ Samsung Galaxy-S4-S3-Note2❦♕
အစရှိတဲ့ ဖုန်း​တွေကို Rom အတင်​အချ လုပ်​လို့ပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊Caustom Rom တင်​တာပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊Upgrade/Downgrade လုပ်​တာပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊ကလိလိုက်​တာ များလို့ပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊ဘယ်​လိုအ​ကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်​ဖြစ်​​ ပေါ့ဗျာ၊IMEI Code ​ပျောက်​ထွက်​သွားပြီး ဖုန်းဆက်​လို့မရ net error ဖြစ်​​နေတဲ့အဖြစ်​မျိုးနဲ့ကြုံ​တွေ့​နေရတဲ့ အခါမျိုးမှာဖုန်းပြန်ပြောလိုရအောင်လုပ်တဲ့
နည်း ​ပျောက်​​နေတဲ့ IMEI Code ပြန်​ထည့်​သွင်း​ပေးမယ့်​ နည်း​လေးကို post အဖြစ်​တင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။
S3 I9300 ကို offi 4.2.2 တင်​လိုက်​တာ IMEI လွင့်​ထွက်​သွားပြီး ဖုန်းပါဆက်​မရတဲ့ net error မျိုး ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်​။တိုင်​ပွတ်​ရုံတင်​မကဘူး တိုင်​ပါကျိုးတဲ့အဖြစ်​မျိုး​ပေါ့ဗျာ။
အဲ ကျုပ်​လိုအဖြစ်​မျိုးကြုံ​နေတဲ့သူ​တွေ အဆင်​​ပြေပြီး တိုင်​ပွတ်​မ​နေ​အောင်​လို့ ရည်​ရွယ်​ချက်​နဲ့ ဒီ post ​လေးကို တင်​ဖြစ်​သွားတာပါပဲ။
Samsung Galaxy S4/S3/Note2 ဒီဖုန်းသုံးမျိုးအတွက်​ပါပဲ။ပြုလုပ်​ပုံနည်းက​
​တော့ လွယ်​ပါတယ်​။computer laptop တစ်​လုံး​လောက်​ရှိထားဖို့​တော့ လိုတာ​ပေါ့​နော်​။သူ့ရဲ့
လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကတော့ Odin ထဲကနေပြီးတော့ သူ့ ဖုန်း Model နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Tar ဖိုင်လေးတွေကို PDA နေရာမှာထားပြီး
Start ခလုတ်​ကို click နှိပ်​ပေးလိုက်ယုံ​လေးပါပဲ။
★ Odin3-v3.04 အား​ဒေါင်းရန်​ လင့်​ခ်​★
( ဒါမှမဟုတ် )
★ Odin3-v3.07 အား​ဒေါင်းရန်​ လင့်​ခ်​★
★ S4 ဖုန်းအတွက်​ Modem_I9500UBUBMG9.tar.md5 အား ​ဒေါင်းရန်​ လင့်​ခ်​★
★ S3 ဖုန်းအတွက်​ Modem XXEMG4.tar.md5 ဖိုင်​အား ​ဒေါင်းရန်​ လင့်​ခ်​★
★ Note2 ဖုန်းအတွက်​ Modem-N7100XXMG1.tar.md5 ဖိုင်​အား​ဒေါင်းရန်​ လင့်​ခ်​★
★ Samsung USB Driver မရှိရင်​ ဒေါင်းရန်​ လင့်​ခ်​★
★ Latest Samsung Kies အား ​ဒေါင်းရန်​ လင့်​ခ်​★
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/28/2016 10:14:00 pm0comments
♪ ဘောလုံးပွဲများတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင် ၊ ရလဒ်များ ၊ ပေါက်ကြေးများ ၊ ပွဲစဉ်များ အားလုံးကြည့်နိုင်သည့် Apk ♫
၁. ဘောလုံးပွဲတွေ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှူ နိူင်တဲ့ page မှာတင်သကဲ့သို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လင့် ရွေးချယ်၍ ကြည့်နိူင်ခြင်း(ပေ့ခ်ျ မှာ မတင်သည့်ပွဲများ apkမှာကြည့်နိူင်ပါတယ်)
၂. ပွဲပြီးသည်နှင့် ဟိုက်လိုက် များပြန်ကြည့်နိူင်ခြင်း
(ပေ့ခ်ျ မှာ မတင်သည့် ပွဲစဉ် များ apk မှာ ကြည့်နိူင်ပါသည်)
၃. နိူင်ငံတကာ ပွဲစဉ် ရလဒ် နှင့်အမှတ်ပေး ဇယားများကြည့်သိရှိနိူင်ခြင်း.
၅.ကျွန်တော်တို့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ HD.အထူးရှယ် မျက်နှာပြင်ကျယ် လင့် နှင့် သူ့ကိုကြည့်ဖို့ရာ apk ပါထည့်ပေးထားပါသေးတယ်..
Fb. အကောက် ခနခဏပျတ်သူတွေ အတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါမယ် နောက် apk တစ်ခုထဲ မှာ ဘောလုံးပွဲနှင့်ပက်သက်သမျှကိုလဲ သိနိူင်ပါမယ်.
ဘာလို့ apk မှာ တင်သလို ပေ့ခ်ျမှာ မတင်လဲလို့မေးစရာတော့ရှိပါတယ် .. fb. က မူပိုင်ခွင့်တွေများသည့် အတွက် ဘလော့ထိခြင်း report ပြုလုပ်ခံခြင်းများ ခံရလို့ပါ . ..
မှတ်ချက်.. playstore မှာ တင်ထားသည့်အရင်က apk အသုံးပြုသူများ အဟောင်းကိုထုတ်ပြီးမှ ထည့်ပါ.. နောက်လမှ playstore မှာ updat လုပ်ပေးပါမည်..
ဘဝတူ ဘောလုံးပွဲဝါသနာရှင်တွေအစဉ်ပြေကြစေလိုရန် ရည်ရွယ် ၍..
Credit to ==> ဘောလုံးပွဲများတိုက်ရိုက်ကြည့်ရူ့နိုင်သည်
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/28/2016 09:05:00 pm0comments
SMS က chat တာဖြစ်တာကြောင့် internet မလိုပါ။
Operator မှသတ်မှတ်သော SMS ခပေးရမည်။
တစ်လ ၅၀၀ နှင့် Unlimited sms ပို့နိုင်သော Telenor စူပါစုံတွဲ Plan အတွက်ရည်ရွယ်သည်(အသေးစိတ်ကို Telenor website မှာကြည့်ပါ)
ချစ်သူအချင်းချင်း တစ်ယောက်က ယူနီကုဒ်၊ တစ်ယောက်က ဇော်ဂျီဖြစ်နေသည့် ပြဿနာများကို ရှင်းပေးသည်။
Sticker များအချင်းချင်း ပေးပို့နိုင်သည်။
Sticker များကို GiG မှ ဆွဲပေးသည်။
နှစ်ဖက်လုံး Couple Chat ရှိရန်လိုအပ်သည်။
sms အသုံးပြုသောကြောင့် Telenor စူပါစုံတွဲမဟုတ်ပါက Operator မှသတ်မှတ်ထားသော SMS အသုံးပြုခပေးရမည်။
သမီးရည်းစားပြဿနာများသည် Couple Chat နှင့်မဆိုင်။ ပတ်သက်မှုမရှိစေရ။
သင့် Private information များကို လုံးဝ သိမ်းဆည်းမှတ်သားထားချင်းမရှိ။
Couple Chat isaburmese sms chat app for couples.
- Beautify Stickers by GiG
- Zawgyi/Unicode embedding and converting
- Couple Chat use sms.
- Standard sms charges may apply
- Your relationship problems do not concern with Couple Chat
Credit - Myat Min Soe
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/28/2016 09:02:00 pm0comments
သုံးချင်​တဲ့ သူများ အလွယ်​တကူ သုံးနိုင်​​အောင်​ လို ပြန်​ share
​ပေးလိုက်​ပါတယ်​ မူရင်​ အကိုက​တော့ (zar nie) ဖြစ်​ပါတယ်​
ကျွန်​​တော်​က​တော့ ဒီည ​လျောက်​ပြီ ​သုံး​တော့မယ်​
Credit.by- ထက်​​အောင်​​ကျော်​ နည်းပညာမှတ်​စု
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/28/2016 09:01:00 pm0comments
သစ်ပင်စိုက် မွေးမြူရေးလုပ် ရမယ့်ဂိမ်းလေးပါ [61.2 MB] [apk]
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/28/2016 08:58:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/28/2016 08:56:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/28/2016 08:54:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/28/2016 08:52:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/26/2016 05:40:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/25/2016 10:34:00 pm0comments
Android Firmware မျိုးစုံကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းယူနိုင်မည့် Easy Easy Firmware Download Tool
Android ဖုန်း Firmware အမျိုးအစားစုံကိုရယူနိုင်မယ့် Easy Easy Firmware Download Tool ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီ Tool ကိုအသုံးပြုပြီးရှာဖွေနိုင်တဲ့ Firmware အမျိုးအစားတွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းပါ။
Samsung MTK Clone
Htc MTK Clone
ဖုန်းဆော့ဝဲဆားဗစ်သမားတွေအတွက် ရှိထားသင့်တဲ့ Tool လေးတစ်ခုပါပဲ။
Android ဖုန်း Firmware အမျိုးအစားစုံကိုရယူနိုင်မယ့် Easy Easy Firmware Download Tool ကိုအောက်က link မှာရယူနိင်ပါတယ်။
Download Easy Easy Firmware Download Tool
Ref: Joker Soft
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/25/2016 10:33:00 pm0comments
Android Version 5.0 နှင့်အထက် ဖုန်းများကို မြန်မာစာ မှန်အောင်ထည့်သွင်းနည်း (၁)
Android 5.0 နှင့် အထက် ဖုန်းတွေ မြန်မာစာ မမှန်လို့ဆိုပြီး Message Box က တမျိုး Email ကတဖုံ မေးလာကြပါတယ်....
ဟုတ်ပါတယ်.... Samsung Lollipop 5.0 နှင့် အထက် ဖုန်းတွေမှာ Built-in Myanmar ( ZawGyi ) , Myanmar ( Unicode ) ဆိုပြီး ပါပေမဲ့... နေရာတိုင်း မမှန်သေးပါဘူး...
ကျနော်လည်း ဒီပို့စ်ကို ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ ကျန်းမာရေးကြောင့် မရေးဖြစ်ဘူးဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ...
ကဲ... ဒီနေ့တော့ ရေးလိုက်ပြီနော်.... :)
တကယ်လို့ စာဖတ်သူက Root ဖေါက်တာ ၊ Recovery သွင်းရတာမျိုး မလုပ်ပဲ Facebook , Messager , Viber , WeChat , Line စတဲ့ Application တွေမှာ မြန်မာစာမှန်ရင် ပြီးရောဆိုရင်တော့ ဒီ Zawgyi One T5 Font လေးကို ဒေါင်းယူ Install လုပ်ပါ။ မရရင် ဒီမှာ ဒေါင်းပါ။
ပြီးရင် Setting > Font မှ Font Style ကိုနှိပ်ကာ စောစောကထည့်လိုက်တဲ့ Zawgyi One T5 ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ... ရေးဖို့ Keyboard လိုရင် ဒီမှာ ဒေါင်းယူ Install လုပ်ပါ..ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီ..။
အဲ့ဒီနည်းကတော့... နေရာတိုင်း မမှန်တာကလွဲပြီး မြန်မာစာကို အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရသွားပါပြီ..။
မြန်မာစာကို နေရာတိုင်းမှာ မှန်စေချင်ရင်တော့ အောက်ဖေါ်ပြပါနည်းလမ်းအတိုင်း မှန်အောင် ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်..။
Lockwork Mode Recovery လို့ခေါ်တဲ့ CWM Recovery ဖြစ်စေ...
TeamWin Recovery Project လို့ခေါ်တဲ့ TWRP Recovery ဖြစ်စေ သွင်းထားပြီးဖြစ်ရပါမယ်...။
ဖေါ်ပြပါ Recovery နှစ်မျိုးထဲမှ တခုခုသွင်းထားပြီးပြီဆိုရင်.... ယခုဖေါ်ပြမဲ့ နည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
(ဘာမှမလုပ်ခင် မိမိဖုန်းအတွင်းမှ အရေးကြီးတာတွေကို Backup လုပ်ပါ)
ကို Aung Thura ရေးထားတဲ့ ဒီ Samsung Lollipop Font Zip ကို ဒေါင်းယူပြီး SD Card ထဲကို Copy ကူးထည့်ထားပါ...။ (Zip ဖိုင်လ်ကို ဖြည်စရာမလိုပါ)
ဖုန်းကို Power Off (ပိတ်) လိုက်ပါ...
Home + Volume Up + Power စတဲ့ ခလုတ် သုံးခုကို တပြိုင်တည်း ၁၀ စက္ကန့်လောက် တွဲနှိပ်လိုက်ပါ...
Recovery Mode ကိုရောက်ရင် Install Zip မှ တဆင့် စောစောက ထည့်ထားတဲ့ Samsung Lollipop Font Zip ကို Flash ပေးလိုက်ပါ...
ပြီးရင် Back ခလုတ်နှင့် နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး Reboot System Now ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ...
ဖုန်းပြန်တတ်လာရင် နေရာတိုင်း ၊ Application တိုင်းမှာ မြန်မာစာတွေ မှန်သွားပါပြီ။
ဖေါ်ပြပါနည်းကတော့ (Only For Samsung Devices) ပါ...
အခြား ဖုံးအမျိုးအစားတွေပေါ်မှာတော့ မစမ်းသပ်ဖူးသေးပါ။
တကယ်လို့ Boot Loop ဖြစ်နေပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဖုန်းကတတ်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်..
စောစောကအတိုင်း Home + Volume Up + Power > Recovery Mode ကို ပြန်ဝင်ပြီး Wipe data/Factory Reset နှင့် Wipe Cache Partition တို့ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..။
သတိ။ ။ Wipe Data/Factory Reset , Wipe Cache Partition လုပ်တယ်ဆိုတာဟာ ဖုန်းကို Factory Reset ချတာဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖုန်းမှ Data အားလုံး ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘာမှ မလုပ်ခင် အရေးကြီးတာတွေကို Backup လုပ်ထားဖို့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တာပါ။
ပြီးရင် Reboot System Now ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/25/2016 10:27:00 pm 1 comments
မိမိဖုန်းတွင် VIrus ကိုက်မကိုက် သိနိုင်သည့်အကြောင်းများ
– WiFi, Mobile Data Auto ပွင့်နေခြင်း။
– Software များ Auto Download ဆွဲခြင်း/ Auto Install လုပ်ခြင်း
– အသုံးပြုရ အဆင်မပြေရလောက် ဖုန်းလေးလံခြင်း/ ဟန်းခြင်း။
– မကြာခဏ restart ကျခြင်း
– အလွန်အမင်း Battery အကုန်မြန်ခြင်း
– ဖုန်းတွင် Force Close, Has Stopped စသည့် Error Box များ တက်ခြင်း
စသည့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်နေပြီဆိုပါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MPPG (Ghost Push Trojan Killer- Pro) ကို အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
Computer တွင် .net framework 4.5 ရှိရန်လိုအပ်ခြင်း
ဖုန်းမှာ Root ဖောက်ထားရန် လိုအပ်ခြင်း
* MPPG Ghost Push Trojan Killer- Pro ကို Download ရယူပါ။
* Software ကို run ပါ။
* အပေါ် Menu ထဲမှ Auto Killer ကို နှိပ်ပါ။
* Virus Scanner ကို နှိပ်ပါ။
* ဖုန်းအတွင်း Virus များရှိမရှိ စစ်ဆေးနေပါလိမ့်မယ်။ ပြီးနောက် Virus ရှိပါ က
* Virus Killer ကို နှိပ်ပြီး Virus များကို ရှင်းလင်းလိုက်ပါ။
* Done လို့ ပေါ်ပြီး ဖုန်း Restart ကျသွားရင် ရပါပြီ။
– Firmware ကျခြင်း/ စက်ပျက်ခြင်း စသည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ လုံးဝ မရှိပါ။
-Virus အရမ်းများနေရင် Software ကို ၂ ခါလောက် run ပေးပါ။
– ၂ ခါ လောက် run ကြည့်ပြီးမှ Virus မသေလျှင် နောက်ထွက်သည့် Update ကို စောင့်ပါ။ (သို့) Firmware သာ ပြန်တင်ပါ။
– Virus Update များ မကြာခဏ ထွက်ရှိခြင်းကြောင့် ယခု Software ကို ၁ဝ ရက်အတွင်းသာ အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။ နောက် ၁ဝ ရက်နေရင် Update Version တင်ပေးပါမယ်။
Ghost Push Trojan Killer PRO v 2.1 >> Ghost Push Killer PRO v 2.1[MPPG]
Credit..by.. Phyo Nyi Nyi [ MPPG ]
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/24/2016 07:25:00 am0comments
Gmail Account ကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နှင့် Facebook Account ဖွင့်နည်း
Gmail Account ကို ကိုယ်တိုင်းပြု
လုပ်ပြီး Facebook Account ကို အလွယ်
တကူ ဖွင့် နည်း စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ်လိုသာပြောရတာ စာအုပ်ထဲမှာ စာ
တွေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ ScreenShot ပုံ လေးတွေနဲ လွယ်
ကူစွာ ရှင်းပြထားတာပါ Facebook ကို
Gmail နဲ အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရပြီး
Gmail နှင့် Facebook ဖွင့်နည်းစာအုပ် အားဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/24/2016 07:20:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/22/2016 06:05:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 2/19/2016 09:26:00 pm0comments